▷ Iibso Smartwatch, 1.28 inch Full Touch Screen Biyo-ilaaliye Smart Watch 68, Kormeerka Hurdada iyo Kaloriinta Heerka Wadnaha, Ogeysiisyada Wacan, Ilaalida Ciyaaraha Haweenka ee Android IOS - 【Isbarbardhigga】 2022
Soo iibso Smartwatch, 1.28 inch Full Touch Screen 68 Smart Watch, Hurdada iyo Kalorie Kormeeraha Heerka Wadnaha, Ogeysiisyada Wacan, Daawashada Ciyaaraha Haweenka Android iOS
Fiidiyowga Amazon Prime (Video ku saabsan Baahida); Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson (Jilayaasha)
Smartwatch, 1.28 inch Full Touch Screen 68 Smart Watch, Kormeere ...
[IP68 Waterproof and Color Touch Screen] - Saacadda smart waxay ka kooban tahay 1.3-inji TFT LCD ah iyo taabashada dareenka sare, taasoo ku siinaysa khibrad daawasho oo raaxo leh iyo khibrad isticmaale oo siman. Qiimaynta biyuhu ee IP68 iyo kuwa aan boodhka lahayn ayaa ka dhigaya saacadaha ragga ee adkaysi u leh dhididka, roobka shilalka ah, ama qulqulka biyaha, markaa uma baahnid inaad ka walwasho waxyeelo si aad ula socoto dhaqdhaqaaqa markaad dhaqayso gacmahaaga. .
[8 Hababka la socodka xogta ciyaaraha] - Saacadaha caqliga badan ee ragga ayaa la socon kara socodka, orodka, kubbadda koleyga, baaskiilka, jirdhiska, kubbadda cagta, boodboodka, badminton iyo xogta ciyaaraha kale, si ay si wanaagsan u xakameeyaan tababarrada kala duwan. Saacaddan caqliga leh ee xoogga leh ee ragga waxay sidoo kale duubi kartaa xogta maalinlaha ah sida tillaabooyinka, masaafada la safray, iyo kalooriyeyaasha gubtay, si toos ah ula socdaan tayada hurdada, oo waxay kaa caawin kartaa falanqaynta tayada hurdada.
[Heerka garaaca wadnaha, kormeeraha cadaadiska dhiigga] - Saacaddan caqli badan ee shaqaynaysa waxay isticmaashaa tignoolajiyada dareenka horumarsan, isticmaalka tamarta hoose iyo saxnaanta sare. Si toos ah oo joogto ah ula socoshada garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga wakhtiga dhabta ah si aad si fiican ugu fahanto caafimaadkaaga jireed ee maalinlaha ah. Saacadaha gacanta ee qaaliga ah waa hadiyado la yaab leh qoyska iyo saaxiibada ee Thanksgiving, Christmas, iyo maalmaha dhalashada.
Nolosha baytariga dheer iyo Shaqada Ogeysiinta Wacan: Ku-dhismay Quwadda hoose ee Bluetooth chip iyo awooda batari ee 210mAh oo weyn. Fudud in lagu dallaco, ku dallaca degdega ah iyo cimriga batari dheer. Saacadda waxaa la isticmaali karaa 7-9 maalmood ka dib 2,5 saacadood oo lacag ah. Ku xidh raadiyaha dhaqdhaqaaqa taleefankaaga. Waligaa ma seegi doontid wicitaan ama fariin.
[Smart Watch Adeegga Macmiilka] - Haddii saacaddu wax leedahay, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa wixii su'aalo ah ama soo jeedin ah. Waxaan kaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalaha 24 saacadood gudahood.
Kuwii ugu dambeeyay ee Smart Watchs:
Kounga FitPro Tonic, Dhaqdhaqaaqa Wacan ee Wacan ee leh Kormeeraha Hurdada, Pedometer, Heerka Wadnaha ...
Gacanka Dhaqdhaqaaqa Jirka, Watch Smart oo wata inta jeer ee Cadaadiska Dhiigga Ogsajiinta
Smartwatch, Gacanka Hawsha Jirdhiska, Saacadda Wacan ee leh Cadaadiska Dhiigga Ogsajiinta...
Saacadda Wacan, Gacanka Dhaqdhaqaaqa Jirka, Saacadda Wacan ee leh Cadaadiska Dhiigga Ogsajiinta...
Xiaomi Band 5, Unisex qaangaar ah, madow, * 1.1 weyn "shaashadda midabka firfircoon * Kormeerayaasha ...
Shaashadda Taabashada Midabka Amoled ee Cusub; Ilaa 14 maalmood oo batari ah
Amazfit Band 5 Gacanka Waxqabad ee Wacan, Unisex Adult, Black, Hal Cab
Mi Smart Band 6 * 1.56 Shaashadda Buuxa Amoled * 30 Qaababka Tababarka * Kormeeraha SpO2 * Iska caabbinta ...
Magaca Waaxda: Adult Unisex
Xiaomi Redmi Smart Band Pro - jijin firfircoon oo leh 1,47 "AMOLED Screen, in ka badan 110 ...